एमाले स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्दै, के-के छन् एजेण्डा ? — Imandarmedia.com
एमाले स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्दै, के-के छन् एजेण्डा ?
काठमाडौं । नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठक र केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्दै आज बस्दैछ। स्थायी कमिटी बैठक बिहान ११ बजे ललितपुर च्यासलस्थित तुल्सीलाल स्मृति प्रतिष्ठानको भवनमा बस्नेछ भने केन्द्रीय कमिटी बैठक पनि सोही स्थानमा दिउँसो ३ बजे बस्नेगरी बोलाइएको छ।
बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गर्ने राजनीति प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलको सांगठनिक प्रस्ताव र संगठन विभाग प्रमखु विष्णु पौडेलको विधान संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल गरिने जनाइएको छ।त्यसैगरी बैठकमा दशौं महाधिवेशनको सम्बन्धमा पनि छलफल गरिने एक नेताले बताए ।वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षसँग एकताको लागि भन्दै एमाले बैठक आजसम्मका लागि पछि धकेलिएको थियो।
त्यसपछि केन्द्रीय कमिटी बैठकमा तीन वटा प्रतिवेदन पेस गरेर छलफल खुला गरिने तामाङको भनाइ छ। उनले भने, ‘केन्द्रीय कमिटीले त्यसलाई अनुमोदन गर्छ। अनि छलफलको लागि ओपन गर्छौं। हाम्रा मातहतका कमिटी, जनसंगठनहरूमा छलफल हुन्छ।
विधान महाधिवेशनको तयारीका लागि यो सबै काम भइरहेको तामाङमा भनाइ छ । एमालेले आगामी भदौ २७ र २८ गते विधान महाधिवेशन गर्ने भएको छ । यस्तै विधान महाधिवेशनपछि असोज ३ मा देशभरका ६ हजार ७ सय ४३ वडामा एकै दिन वडा अधिवेशन र असोज ९ मा ७ सय ५३ पालिकामा अधिवेशन गर्ने छ।
तर एमालेको माधव नेपाल पक्षले एकताको प्रयास भइरहेको भन्दै पार्टी गतिविधि रोक्न माग गरिरहेको छ । तामाङले भने एकताको प्रयास र पार्टीको सांगठनिक गतिविधि नरोकिने बताए। उनले भने, ‘हामी निरन्तर संवादमै छौं। उहाँहरुलाई पार्टीमा सहभागी गराउन लागि गरिने प्रयत्न पनि रोकिँदैन र पार्टीको गतिविधि पनि रोकिँदैन।
यो पनि : प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)की सांसद डा. विमला राई पौडेलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पार्टी (नेकपा एमाले) फुटाएर मात्रै मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्न चाहेको आरोप लगाएकी छिन्।आइतबार राष्ट्रियसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद पौडेलले सबैभन्दा ठूलो पार्टी कहिले फुट्ला र फुटेपछि मन्त्रिपरिषदमा समावेश गरौंला भनेर प्रधानमन्त्री देउवाले पर्खेर बसिरहेको दावी गरिन्।
उनले भनिन्, ‘सबैभन्दा ठूलो पार्टी कहिले फुट्ला र फुटेपछि मेरो सरकार टिकाउन मन्त्रिपरिषदमा ज्वाइन गराउँला भनेर पर्खेर बस्ने प्रधानमन्त्री हो ? यति कमजोर प्रधानमन्त्री। चिन्ता शेरबहादुर जी कमजोर हुनु भो भनेर होइन्, चिन्ता फेरी संसदीय व्यवस्था कमजोर हुन्छ भन्ने हो यो व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने काम नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई मेरो अनुरोध छ।
सांसद पौडेलले राजनीतिक संयन्त्र बनाउने हल्ला चलिरहेको भन्दै त्यसको बन्धक नबन्न पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह गरिन् । उनले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्न पनि त्यस्तै खालको राजनीतिक संयन्त्रको मागले भएको दावी गर्दै उनले अहिले पनि सरकारलाई कमजोर बनाउन सो प्रयास गरिएको उल्लेख गर्दैै त्यसको बन्धक नबन्न प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यानाकर्षण गराइन्।
सांसद राईले राजनीतिक संयन्त्र बनाउने हल्लाकै कारण प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्न नसक्ने लज्जाजनक अवस्था आएको प्रतिक्रिया समेत गरिन्।सांसद पौडेलले प्रधानमन्त्री देउवालाई पटक पटक संसदप्रति जवाफदेही बन्न तर राजनीतिक संयन्त्रको बन्धन नबन्न आग्रह गरिन्।